Ahoana ny fomba hampiasana stratejika automatique marketing mahomby | Martech Zone
Ahoana ny fampiasana teti-pitantanana fahombiazan'ny marketing automatique
Wednesday, May 6, 2015 Talata, May 5, 2015 Michael Shearer
Ahoana no fomba hampiasanao ny tetikady mahomby amin'ny automatisation marketing? Ho an'ny orinasa maro dia ity ny fanontaniana an-tapitrisany (na mihoatra) dolara. Ary fanontaniana tsara apetraka izany. Na izany aza, tsy maintsy manontany ianao aloha hoe inona no sokajiana a paikady automatisation marketing mahomby?
Inona ny tetikady mahomby amin'ny marketing ho an'ny marketing?
Manomboka amin'ny a tanjona na napetraka ny tanjona. Misy tanjona kendrena vitsivitsy izay manampy anao handrefy tsara ny fampiasana marketing automatique mahomby. Anisan'izany:
Vokatry ny paikady automatisation marketing mahomby amin'ny Mitombo in:
Vokatry ny paikadin'ny marketing ho an'ny marketing mahomby amin'ny a fihenana in:
Ny tsingerin'ny varotra
Fotoana fivarotana very
Na dia ny fandinihana an'io tanjona marobe azonao tratrarina io aza dia tsy azo antoka ny fametrahana paikady automatisation marketing mahomby.
Famaritana ny paikadinao amin'ny automatisation marketing
Nieritreritra ireo tranga 20+ momba ny automatisation marketing izay nanampiako nametraka sy izay itovizan'ny olona mahomby indrindra. Nahita fitoviana roa noresahina tamin'ny tetika rehetra momba ny automatisation marketing nahomby aho izay anisan'ny: fitantanana fitarihana mahomby sy fitahirizam-boky atiny matanjaka.
Fitantanana fitarihana mahomby dia singa iray somary midadasika amin'ny automatisation marketing ka hotapahiniko amin'ny sehatry ny fitantanana fitarihana izay hanampy ny orinasa hahita fahombiazana amin'ny fametrahana automatisation marketing. Hanombohana, ny varotra sy ny marketing dia tokony hiaraka hamaritana firaka. Tsara kokoa, farito ny fitarika eo amin'ireo andiana piraofilina na personas. Inona avy ireo soatoavina demografika / firaketana faratampony izay mitarika mitarika?
Mametraka ny dingana ataonao dia manaraka. Mety ho tsotra toy ny dingana mitarika nentim-paharazana toy ny MQL, SAL, SQL, sns. Na, ny orinasa dia afaka mamorona famaritana dingana fitarihana voatondro izay mamantatra tsara kokoa ireo dingana tsy manam-paharoa amin'ny fizotry ny fividianan'ny mpanjifany.
Aorian'izay, tariho ny famaritana sy ny dingana, tianao hasiana sary ny atiny misy amin'ny dingana tsirairay. Izany dia hanampy anao hanao fitarihana fitarihana miankina amin'ny dingana misy ankehitriny. Eo no ilalaovana ny fitehirizam-boky momba ny atiny. Amin'ny fananana atiny lehibe zaraina amin'ny faritra rehetra ao amin'ny fantsom-pivarotana, misy tanjona ny automatisation marketing. Raha tsy misy tranomboky votoaty tsara dia kely fotsiny ny zavatra holazainao na hizaranao ny sandanao rehetra.
Mamorona ny programa fanabeazana anao
Ny fiverenana amin'ny fitarihana fitarihana, famaritana ary famoronana programa fitaizana mitarika dia dingana iray lehibe amin'ny famoahana amin'ny fomba mahomby ny automatisation marketing. Ny dingana hamaritana ny dingana mitarika / mitarika dia mitana andraikitra lehibe eto ka izay no antony nanononako azy ireo, fa ny programa fitaizanao mitarika kosa dia hanimba na hampihena ny fampiasam-bolanao.
Ho an'ny programa fikolokoloana firaka, tena ampirisihina mafy ianao hamorona tabilao misy ny programa fitaizanao mitarika mba hananganana làlana fitaizana, hamaritana ireo fikafika ilaina, hamantatra ireo banga ao anatiny ary handrindrana ny andraikitra amin'ny varotra sy ny varotra. Amin'ny famoronana sy fandinihana ity sori-dàlana ity miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka (oh: ekipa mpivarotra sy marketing) dia afaka miaraka mivory amin'ny fampielezan-kevitra mahomby ianao, mamaha ny olana mety hitranga ary manome andraikitra mandritra ny fizotry ny fampielezan-kevitra raha ilaina izany.
Mba hikolokoloana fitarihana mandaitra indrindra, na izany aza, mila mahay mandefa atiny mifandraika amin'ny fotoana mety ianao. Tsy ampy ny manana fitehirizana atiny matanjaka sy ny fanaovana an-tsarintany an'io mba hitarika dingana. Ny fananana ny automatisation marketing anao dia miteraka fandefasana atiny mifandraika amin'izany dia miankina amin'ny famoronana lalàm-pandraharahana mahomby izay manala ho azy ny atiny mifandraika amin'ny hetsika manokana ataon'ny mpitarika.
Ny lalindalina kokoa ahafahanao manara-maso ny hetsika fitarihana ary mamorona fanentanana fitarihana fitarihana tsirairay izay mamaly tsirairay ny demografika + setrin'ny hetsika, ny fahombiazanao bebe kokoa amin'ny automatisation marketing. Ny fikolokoloana firaka mifantoka be dia be dia kely (raha misy) fiverenana miabo tsara. Ny fikolokoloana fitarihana lasibatra be mpampiasa amin'ny alàlan'ny fizarana angon-drakitra mandroso sy manan-danja mifandraika amin'izany dia hiteraka traikefa manan-danja ho an'ny fitarihanao ary amin'ny farany manampy anao hahatratra ny tanjona amin'ny automatisation marketing izay nofaritanao voalohany.
Fampisarahana ny fitarihan'ny marketing anao
miaraka Marketing automatique valiny Net, mirehareha amin'ny fananana ny fizarana angon-drakitra mandroso tsara indrindra sy fitaovana fitaizana mitarika amin'ny orinasa izahay. Ny fandefasana hafatra be mpifaninana amin'ny votoaty mifandraika amin'izany dia fenitra vaovao ho an'ny fampielezan-kevitra rehetra momba ny varotra ary nataonay mora izany ho an'ny mpivarotra amin'ny Net-Valiny. Ny fizotran'ny fizarazaranay dia ivon'ny Net-Valiny ary manampy amin'ny fitarihana ny programa fitaizamanao mitarika amin'ireo laharam-pahamehana ho an'ny marketing automatique hafa toy ny scoring lead, fanairana eo noho eo, tatitra ary maro hafa.
Azonao atao ny mamorona fitsipika fizarazarana lalina hanombohana izay fampielezana fikolokoloana ary ny sampana tsirairay amin'ny fampielezana dia ampiasain'ny motera fizarana matanjaka mitovy amin'izany, ahafahan'ny fitambaran-jatony an-jatony mihetsika am-pahalalana sy mora amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanabeazana sy ny fividianana.
Tags: mampihena ny varotra verymampihena ny vidin'ny marketingmampihena ny tsingerin'ny varotramanaparitaka automatique marketingmampitombo ny vola miditramitarika fikarakaranapaikady fikolokoloana firakaautomation marketingfizarana automation marketingpaikady automatisation marketingfitarihana mahayvarotrafamokarana varotra
Michael dia talen'ny marketing an'ny Valiny Net. Michael dia Teknolojika varotra mamorona, stratejika ary manavao izay mahomby amin'ny fanekena ny lamina, ny famolavolana vahaolana mamorona ary ny fampiasana ny haitao farany havaozina mba hananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika ho fanohanana ny tanjon'ny varotra sy ny varotra.
Inona ny atao hoe Google Analytics Cohort Analysis? Ny torolàlana amin'ny antsipiriany
Safidy ara-barotra azo ekena ve ny faneken'ny olo-malaza?
Sep 4, 2015 amin'ny 7: 56 AM
Fitiavana lazainao ny tabilao mikoriana ao amin'ny lahatsoratr'i Michael! Mety ho sarotra ireo zavatra ireo ary hitako fa tena manandanja tokoa izy io. Indrindra raha mampiasa fitaovana toy ny Hubspot ianao izay tsy misy solontenan'ny fantsona izay amboarinao.
Sep 29, 2015 ao amin'ny 12: PM PM
"Arakaraka ny ahafahanao manara-maso ny hetsika fitarihana sy mamorona fampielezan-kevitra momba ny fitaizam-bolo tsirairay izay mamaly tsirairay ny demografika + setrin'ny hetsika no hahombiazanao bebe kokoa amin'ny automatisation marketing." Tiavo ity ary tsy afaka hanaiky bebe kokoa.
Mike liana te handre ny fomba hamaritanao sy hampiasana ny "Action Action" sy ny "Sets aktivitas" mba hampivelatra ny fanentanana hikolokoloana kokoa?
21 Jan 2018 amin'ny 11:34 PM
Lahatsoratra mahafinaritra Michael! Ny fametrahana paikady fanaovana automatisation marketing tsara dia azo antoka fa fototry ny fahombiazana amin'ny taona ho avy
20 Jun 2021 amin'ny 6:04 AM
Ity lahatsoratra ity dia mpamoha maso amin'ny fanaparitahana paikady automatisation marketing.